सरकार भन्छ : श्रमिकले साढे २ अर्ब लगे, जिफन्टको दाबी : ९० प्रतिशत राहतविहीन
कसलाई पत्याउनु ?
रमेश भारती काठमाडाैं, ३ असार
सरकारले कोरोना भाइरस (काेभिड– १९) भमहामारी राेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेकाे लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राहत बाँडेको छ ।
काेराेनाका कारण रोजगारी गुमाएका, दैनिक ज्यालादारी गरी छाक टार्ने श्रमिकका परिवारलाई मात्र साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको राहत वितरण गरिसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताएका हुन् ।
देशभरका स्थानीय तहले ११ लाख घरपरिवारका ४१ लाख मजदुरलाई राहत वितरण गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रोजगार गुमाएका, तलब नपाएका, लकडाउनमा खाद्यान्न समस्यामा परेका श्रमिकका परिवारलाई राहत बाँडिएको हाे ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमार्फत मजदुर र उनीहरूको परिवारलाई राहत बाँडिएकाे मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले स्थानीय, संघीय र प्रदेश गरी तीनै तहको राहत बाँडेको हाे । उनले भने, 'कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका विपन्न जनतालाई राहत वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छन् ।'
कस्ता र कुन क्षेत्रका श्रमिकले राहत पाए भन्ने विषयमा भने तथ्यांक संकलन भइरहेको उनकाे भनाइ छ ।
अधिकांश मजदुर स्थानीय तहको सम्पर्कबाहिर : मजदुर संगठन
सरकारले श्रमिकका नाममा यति धेरै राहत सामग्री वितरण गरेको विषयमा जानकारी नभएको राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन् ।
ट्रेड युनियनहरूले गरेका विभिन्न अध्ययनमा भने सरकारले वितरण गरेको राहत अधिकांश श्रमिकहरूले नपाएको पाइएको छ । कोरोना भाइरसका सबैभन्दा ठूलो मारमा श्रमिक परे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाे ट्रेड युनियनले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गत महिना गरेको एक अध्ययनमा कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका करिब ९० प्रतिशत श्रमिकले कुनै पनि स्थानीय तहसँग सम्पर्क नगरेको देखाएको छ ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले लकडाउनकाे समयमा ७० प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीले तलब नदिएको, दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई परिवार पाल्न समस्या भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार लकडाउनमा बसेका करिब ७० प्रतिशत श्रमिकले तलब पाएनन् भने उनीहरूमध्ये ५० प्रतिशतले विनासूचना राेजगारी गुमाएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कस्ता र कुन क्षेत्रका श्रमिकले साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरकाे राहत पाए ? सरकारले यो विषयमा प्रस्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ । सरकारले राहत बाँडेका श्रमिक र ट्रेड युनियनका श्रमिक फरक छन् कि, यस विषयमा हामीले पनि बुझिरहेका छौँ ।’
उनले थपे, ‘जिफन्टले कोरोना भाइरसका श्रमिकलाई परेको असरबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा ९० प्रतिशत श्रमिकहरू स्थानीय तह र रोजगारदातासँग कुनै सम्पर्कमा नरहेको पाइएको छ । अब सम्पर्कमा नभएका श्रमिकलाई स्थानीय तहले कसरी राहत बाँड्यो ? याे शङ्काकाे विषय बनेकाे छ ।’
जिफन्ट र अन्य मजदुर संगठनले गरेको अध्ययनमा समेत कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारले बाँडेकाे राहत अधिकांश श्रमिकले नपाएको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।
जिफन्टको अध्ययनमा कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरका परिवारको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेकाे छ । उनीहरू भोलिका दिनमा परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, छाेराछाेरीकाे शिक्षादीक्षा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तामा रहेको अध्ययनमा औँल्याइएकाे छ । यस्ताे अवस्थामा सरकारले श्रमिक मजदुरका लागि कुनै पनि राहतका प्याकेज नल्याएकाे भन्दै जिफन्टले गुनासाेसमेत गरेकाे छ ।
जिफन्टकाे अध्ययनमा भनिएकाे छ, 'सरकारले आगामी वर्षको बजेट भाषणमा श्रमिकलाई रोजगारीको आश्वासन मात्र बाँडेको छ । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई पुनर्स्थापना गर्न रोजगारीका लागि कुनै पनि याेजना ल्याएकाे छैन ।'
रोजगारी गुमाएका धेरै श्रमिक फेरि रोजगारी नपाए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जिफन्टको अध्ययनमा उल्लेख छ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा करिब ३० लाख नागरिकले रोजगारी गुमाउँदै छन् । यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जिफन्टको आरोप छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, ३ असार २०७७, ११:०२:००